Ukuhamba u-32km usuka eDublin ukuthola iClan, idolobha elikhangayo elibheke uMfula iLiffey e-County Kildare. Hlola amanxiwa omlando weSonto lasendulo iBodenstown, thola i-oasis efihliwe yeCoolcarrigan House & Gardens, noma ujikeleze imigwaqo yezwe bese ucwilisa indawo enhle.
Itholakala maphakathi noMaynooth neNaas, noMfula iLiffey neGrand Canal ugeleza eduze, idolobhana laseClane ligcwele umlando nomlando. Idolobhana liziqhayisa ngokuxhumana nomlobi odume umhlaba wonke uSt Patrick nombhali owaziwayo, uJames Joyce. Eduzane uzothola izindawo ezinokuthula zaseRobertstown naseLowtown eceleni kweGran Canal. Izindlwana zangaphambilini zomsebenzi wamanzi ophithizelayo, namuhla ungakujabulela ukuhamba ngomsele wokungcebeleka, udobe noma uthathe emaphandleni ngebhayisikili noma ngonyawo.
Ukubukwa Okuphezulu ku-Clane
Indawo yase-Ireland kuphela yezimoto ezihamba phambili eqhuba izifundo zokuqeqeshelwa ukushayela, imisebenzi yezinkampani nemicimbi unyaka wonke.
Iminyaka engama-25 Kuqhubeke: ULullymore Ubeke Izimpande eKildare
IKildare yasendulo namakhosi aseLeinster
Thola okuningi ku-Clane